Fampiroboroboana SEO tranonkala miaraka amin'ny Semalt
(momba ny fanentanana iray tarihin'ny manampahaizana manokana Semalt)
Tsy ela akory izay, ny Web World dia toerana mora ahazoana vaovao ihany. Niova daholo anefa ny zava-drehetra. Androany, ny tambajotra dia lasa fitaovana matanjaka amin'ny fampiroboroboana ny raharaham-barotra. Ireo boky sy gazety, radio, onjam-peo ary na amin'ny fahitalavitra aza dia nesorina taminy. Misy ny olona mividy gazety. Mbola misy ny mihaino ny onjam-peo. Mamatsy vola amin'ny dokambarotra amin'ny fahitalavitra ny vola, saingy fantatry ny rehetra fa tonga ny fotoana hisian'ny zava-misy amin'ny Internet. Ao ny olona dia mahazo vola ary mamorona orinasa mahomby.
Tonga izao ny vanim-potoana vaovao
Ny fiovan'ny radikaly an'izao tontolo izao dia mitranga eo imasontsika. Mihamaro hatrany ny mpanamory mitsinjo ny World Web. Mitombo amin'ny lafiny mitovy ireo teknolojia vaovao. Azonao atao ny miditra amin'ny tambajotra amin'ny alàlan'ny findainao - mijery horonan-tsary, mamaky ny vaovao na ... mividiana blouse vaovao. Mora kokoa ny fandoavam-bola amin'ny entana an-tserasera. Ny olon-tsotra iray izao dia afaka mitsidika ny fivarotana an-tserasera, mandehandeha manodidina ny tranokalan'ny vokatra, ary manontany ny fanontaniany. Na iza na iza dia afaka mahazo valiny avy hatrany satria ny tsikera dia fepetra ilaina amin'ny serivisy mpanjifa kalitao. Nanjary tsena iray ny Internet hahafahanao mividy ny zava-drehetra, ary miaraka amin'izay fotoana izay koa, fitaovana fivarotana matanjaka. Ny fitrandrahana ara-toekarena amin'ny fivarotana an-tserasera dia azo antoka fa manamafy ny tombony amin'ny fampiasa amin'ny tranonkala. Izy ireo dia afaka manampy ny tompona tranokala hampiakatra be ny vola miditra.
Ny fampiroboroboana tranonkala dia tena natao ho an'ny fivarotana izay tadiavin'ny mpanjifa mitady tolotra na entana any amin'ny habaka virtoaly. Ny ankamaroan'ny mpitsidika anao dia olona manankarena. Maro amin'ireo mpividy mety hikaroka ny entanao, fa ... mahita vokatra amin'ireo mpifaninana. Nahoana? Natao teo ambanin'ny masoandro tao amin'ny lisitry ny mpandady tranonkala izy ireo satria efa nanatsara ny loharanon-dry zareo amin'ny Internet teo anoloanao izy ireo. Misy afaka mamoaka sy manolo ny mpifaninana aminy aza? Eny, raha natoky ny fampiroboroboana tranonkala ho an'ireo matihanina Semalt.
Mandeha any amin'ny toerana ambony
Izay rehetra nanokatra fivarotana iray, dia mahalala hoe manao ahoana ny varotra amina faritra malaza ao an-tanàna. Ny mpanjifa dia hahazo ny fahatsapana voalohany momba ny orinasanao alohan'ny fitsidihana. Izy ireo dia mijery ny adiresin'ny fivarotana ary manombantombana ny lazany amin'ny ambaratonga tsy fantatra. Orinasa iray hita eo afovoan-tanàna, miaraka amin'ny be dia be mpizahatany sy mpanjifa manan-karena, no voatohintohina. Ny mpanjifa manankarena dia mihazakazaka ho any aminao. Ity fitsipika ity dia tsy natao ho an'ireo orinasam-barotra ihany. Ny foibe momba ny fahasalamana, ny gym, ny spa ihany koa dia mankato ny lalàn'ny laza, tahaka ny magazay na boutiques. Mahagaga anao ve raha miankina amin'ny hevitra maneran-tany ny olona maneran-tany na olon-kendry ao anaty Internet? Raha ao anatin'ny folo voalohany ianao, ny loharanom-pahalalana dia raisina ho manaja sy malaza.
Toy ny ao amin'ny fivarotana ivelany, ny toerana tsara amin'ny toerana virtoaly dia manintona mpividy. Raha miseho amin'ny valin'ny fitadiavana ambony ianao dia 95% amin'ireo mety ho mpividy no handinika anao. Araka ny asehon'ny antontan'isa, roa isan-jaton'ny olona mitady ihany no maharitra amin'ny pejin-tranonkala fahefatra. Tsy toa ny fivarotana ivelany, fa ny fahazoana toerana ambony dia tsy mitaky vola be amin'ny paikady fampandrosoana. Eto ianao dia tsy hahita mpiasam-panjakana ambony avy amin'ny mpitantana monisipaly, fa matihanina efa za-draharaha. Tsy maintsy karama ihany koa ny serivian'izy ireo, saingy ambany kokoa ny sarany raha oharina amin'ny manofa-trano ao amin'ny faritra malaza eto an-drenivohitra. Saingy na ny toeram-pivarotana afovoany eto afovoan-tany misy sary an-tsaina aza dia tsy hahasarika ny mpaka sary maro avy amin'ny firenena samihafa fa toerana ambony ao amin'ny Google SERP.
Inona no mombamomba ny mpanjifa?
Mba hanomezana tombana ankapobeny momba ny fivarotana an-tserasera ary hankasitraka ny zavatra tokony hatao voalohany, ny manam-pahaizana SEO dia tokony hamakafaka ny entana sy ny serivisy. Amin'ity dingana ity, misy ny paikady fampiroboroboana ny fandraharahana sy ny drafitry ny asa feno. Andao hojerentsika ny iray amin'ireo fanentanana Semalt nahomby - Insignis , fivarotana haingon-trano avy any Romania. Mivarotra entana ho an'ny fampiasana anatiny sy ivelany (fanaka, jiro, kojakoja an-dakozia, tompona labozia, sns). Ny orinasam-bola dia manome serivisy kalitao avo sy avo lenta ny entana ilaina eto an-drenivohitra sy ny tanàna rehetra ao.
Ny fahitana amin'ny ankapobeny amin'ny fivarotana www no hamakafakana ny fangatahana avo lenta, ambany, ary ambany làlana. Nandritra izany fotoana izany, ny manam-pahaizana Semalt dia nandinika ny mombamomba ireo mpifaninana sy mpitarika-tsena hahatsapa ny tombotsoany. Nosoratana an-tsokosoko ny rakitry ny tranokala nitarika teo an-tsaha sy ny mombamomba ny rohy, ary koa ny fangatahana nofaritana ho fanamafisana ny pejin-tranonkala. Amin'ny dingana voalohany, misy pro Semalt hahitana raha mila fanatsarana ankapobeny ny tranokala. Amin'ny farany, dia afaka manome soso-kevitra ny fanatsarana ny rafitry ny tranokala - ny famolavolana, ny fananganana, ny toerana ary ny votoatin'ny fampahalalana vaovao, ny famoronana tranonkala vaovao.
Amin'izao vanim-potoana fanentanana SEO izao dia ilaina ny mandinika raha manova ny CMS, manitsy ny tranokala amin'ny fitaovana finday, mamerina manoratra ny http ho https, sy ny sisa. Ny filàna fanatsarana ankapobeny dia resahina miaraka amin'ny mpanjifa mialoha, mandritra ny teti-bola ho an'ny fampiroboroboana ny tranonkala.
Fikarohana Query Core
Amin'ity dingana ity, misy pro SEO manangona, mivondrona ary mamaritra ny fetran'ny seho semantik. Mifanaraka amin'ny endrika maodin'ny www-fivarotana, ny fototry ny semantik dia mety misy ao amin'ny fikarohana an-jatony hatramin'ny an'arivony. Ny fananganana fototra dia mety maharitra amam-bolana, noho izany dia tanterahina mifanaraka amin'ny asa hafa izany. Nandritra ny raharaha Insignis, nanapa-kevitra izahay ny hampiroborobo ny teny fanalahidy mahazatra ho an'ny pejy an-trano, sokajy vokatra, ary koa ny rambony lava rehetra misy ny laharana eo amin'ny tampony 100. Roa volana taorian'ny nanombohan'ny fampiroboroboana, dia nanampy sokajy roa hafa izahay. .
Izay tranonkala rehetra dia toy ny hazo izay ny vatan-dasy no pejy lehibe, ary ny fizarana sy toko dia sampana sy ravina. Hatraiza ny halehiben'ny tranokala dia miankina amin'ny endrika sy ny karazana tranokala. Ny tranokala pejy iray dia efa manana vatan-kazo izay ahalehibe ny lalana isan-karazany. Insignis, toy ireo tranombarotra rehetra an-tserasera, dia manana rafi-pandeha maro be sy be pitsiny. Ho an'ny tarika fikarohana tsirairay dia mila manangana sy manatsara ny pejy fikarohana ianao. Zava-dehibe ny mahatadidy fa noho ny fangataham-pandeha ambany dia tsara kokoa ny manaparitaka ny tranokalan'ny vokatra. Ho an'ny fangatahana avo lenta, natsangana ny tranobola sokajy.
Ny aingam-panahy ho an'ny tranokala fiaramanidina vaovao dia mipoitra amin'ny fotoan'ny famakafakana ny fampisehoana ny mpifaninana, ary koa ny entana sy ny serivisy serivisy. Ho an'ny fivarotana tranokala lehibe misy foibe fizarana any amin'ny tanàn-dehibe samihafa, toa ny Insignis, tsena ary marika manana birao misy ifandraisany dia marobe ny isan'ireo tanànan'ny haingam-pandeha izay marobe ny tanàn-dehibe. Ny votoatin'ny tranonkala toy izany dia tsy maintsy miavaka. Amin'ny tetikasa lehibe, tranokala fanivanana vaovao dia vita na dia roa taona hatramin'ny nanombohan'ny fampiroboroboana ny tranokala. Mba hahazoana ny vokatra irina, ny hetsika lehibe amin'ny fanitarana ny tranon'ny tranokala dia tokony hapetraka haingana araka izay azo atao.
Tanjona optimization anatiny
Manitsy ny lesoka amin'ny fitrandrahana tranonkala anatiny ny manam-pahaizana manokana, miasa miaraka amin'ny pejin-tranonkalam-pifandraisana ho an'ny vondrona mpangataka, manaisotra ireo takelaka. Mba hanaovana izany, ny fanamarinana SEO ara-teknika amin'ny tranokala dia miorina amin'ny fototry ny asa iray anaovana fananganana asa ho an'ny anatiny. Raha ny insignis, nisy nanitsy ny lesoka ary avy eo dia nahavaha ny olana lehibe nofantarina tamin'ny alàlan'ny fanadinana teknika.
Ny iray dia tokony hanao ireto asa manaraka ireto:
hanampiana mombamomba ny takelaka miady amin'ny pejin'ny tranokala hampiasa ireo teny manan-danja be;
hametraka ny hafainganam-pandehan'ny mpizara sy ireo pejy amin'ny tranokala;
hanaisotra rohy tapaka
hanamboarana ny 404 lesoka rehetra ary ho azo antoka fa marina daholo ny URL rehetra;
fametrahana ny angon-drakitra voalamina momba ny karazan'entana eo an-toerana ary manitsy ny fandaharam-potoana amin'ny tranoben'ny vokatra;
hanaisotra ireo duplication ny URL mampiasa redirect foana, adiresy kanônika, manaraka ny noindex;
fanitsiana robots.txt mba hikatona ireo takelaka ilaina ary hisorohana ny fandefasana ireo pejy mitsangatsangana isan-karazany sy ny pejy fitadiavana pejy;
hamokatra sarintany misy XML;
fanoratana votoaty SEO tokana ho an'ny pejy lehibe sy sokajy mampiasa ny teny manan-danja mifandraika;
mba hampidirina ireo sary israelita tsy hita amin'ny sary amin'ny alàlan'ny taranaka nifandimby.
Zava-dehibe tokoa ny fananganana tranokala fakan-tahaka fa ny fanaovana fifandraisana an-trano ahafahan'ny mpanjifa sy ny tranon-jotra mora miditra amin'ny tranokala hafa. Raha tsy misy izany dia mety tsy hivoaka eo amin'ny sehatry ny mpikirakira tranonkala izy ireo. Ny manampahaizana manokana momba ny SEO dia manangana ny fampifandraisana ireo sokajy menu miaraka amin'ny fanampian'ny sora-tanana novolavolaina, izay nampiany ny fangatahana taloha sy nitambatra, namindrana ny lanja static amin'ny pejin-tserasera ambany amin'ny fifaninanana ambany ho any amin'ireo pejy misy ny fitsirihana avo kokoa.
WWW fivarotana votoaty optimization
Ny optimizer dia manamboatra marika meta miavaka sy lohatenin'ny H1 miorina amin'ny "rambony lava" amin'ny fangatahana fitadiavana an'ireo tranonkala ireo raha ilaina izany. Ary koa, ho an'ireo pejy nampiroborobo ao amin'ny fivarotana www, dia misy ny andinin-tsoratra izay ahitana ireo fanontaniana lehibe nangonin'izy ireo, mazava ho azy, amin'ny alàlan'ny fandinihana ireo fangatahan'ny mpandeha tranonkala ankehitriny. Ny lahatsoratra dia misy fiantraikany amin'ny laharam-pahamehana roa pejy amin'ny alàlan'ny fangatahana avo lenta ary fampisehoana fanontaniana lava-jorony Raha ny insignis, nisy nahatratra ny laharana ambony indrindra ho an'ny teny manan-danja indrindra, ary ho an'ny laharana lava rehetra hiditra amin'ny tampony 100. Ho fanampin'ny sokajin-tranonkala lehibe sy laharam-pahamehana, ireo pejy manaraka dia nahazo ny ampahany lehibe indrindra amin'ny fifamoivoizana - jiro / jiro / entana haingo / jiro.
Io no isan'ny ambony indrindra amin'ireo pejy loharanom-pahalalana azon'ny roboka mikaroka ao amin'ny Google mandritra ny fotoana voafetra. Tsiahivina fa ny matihanina efa za-draharaha ihany no miara-miasa amin'ny tetibola mpiady. Ilay manam-pahaizana dia nanidy ny "pejy fako" noforonina fotsiny ho an'ny mpanjifana ihany, mandrara ny mpihaza tranonkala hitsidika ny "pejy fako" ary hanidy rohy ho azy ireo.
Fanatsarana ny fampiasana ny tranonkala
Moa ve ny algorithm amin'ny alàlan'ny mpitsikilo tranonkala mandinika ireo fihetsika? Izy ireo dia manao. Izany no mahatonga ny SEO-pros miasa amin'ny asa toy ny:
tsy fiverenan'ny mpanjifa mankany amin'ny seho fikarohana;
ampitomboina ny fotoana atokana amin'ny tranonkala.
Ny fampidirana ny fivarotana www ho an'ny finday dia tena hitombo ny fahitana ny tranokala amin'ny valin'ny finday. Izy io koa dia mitondra fiovam-po mandroso avy amin'ny fitaovana finday. Ny fanamoriana fanamorana dia manamaivana ny taham-bony. Ny famolavolana mety ny pejy "About Us" dia hampivoatra ny fahatokisan'ireo mpitsidika sy mpandady tranonkala.
Ny fitrandrahana tranonkala ivelany
Iza avy ireo loharano mahasoa ity? Izy ity dia ilaina ho an'ireo tranonkala miasa eo amin'ny tontolo mifaninana. Amin'ny sehatra sasany amin'ny fifaninanana ambany dia azonao atao ny tsy mamorona rohy miditra. Fa ho an'ny ankamaroan'ny tranonkala dia tsy azo ihodivirana ny fahombiazana ivelany. Ny tranonkala tematikim-pandrosoana dia mitondra anao kokoa, ny fahatokisana anao no tonga eo imason'ny "mpijery tranonkala". Misy marika maro izay mila manangana mombamomba rohy ary misafidy mpamatsy vola.
Mitombo ny fiovam-po avy amin'ny mpitsidika hatrany amin'ny mpanjifa
Ity sehatra amin'ny fampiroboroboana tranonkala ity dia mila fahalalana amin'ny famolavolana, ny fampiasana, ny marketing mailaka, ary ny fahaiza-manao amin'ny famoronana votoaty avo lenta. Ny manam-pahaizana SEO eto dia manatanteraka ireto hetsika manaraka ireto:
manitsy endrika endrika;
manampy ny algorithm amin'ny fifandraisana-amin'ny-manager;
manova ny loko loko singa webpage;
miasa amin'ny fijoroana ho vavolombelona;
manova ny lohamilina ireo manokana.
Ary ity ihany dia zato ihany ny fanatsarana izay mampitombo ny fiovan'ny tranokala. Raha tonga amin'ny fahombiazan'ny Insignis, iray amin'ireo teny manan-danja amin'ity orinasa ity no nanao ny laharam-pahamehana tamin'ny fananganana ny TOP-10. Ny teny fototra hafa (ho an'ny sokajy laharam-pahamehana) dia efa nahatratra ny TOP-3. Ny fahombiazan'ny varotra an-tserasera dia tsy hevitra manjono. Azo ambara amin'ny zava-misy izany. Ny fahombiazan'ny fampielezankevitra SEO ho an'ity orinasa romanianina ity mandritra ny 6 volana dia hita taratra eto amin'ireto tarehimarika ireto: 232 ny teny manan-danja dia ao amin'ny TOP-1 ary 1136 ireo teny manan-danja dia ao amin'ny TOP-TEN (raha oharina amin'ireo tondro alohan'ny fampielezana - 4 sy 55, tsirairay avy). Nandritra ny volana voalohany, nitombo mihoatra ny 1000 ny isan'ireo olona mikaroka ireo vokatra ireo amin'ny alàlan'ny fikarohana organikika. Ny olona iray dia afaka mahita ny fidiram-bola sy ny fanekena marika tsara kokoa. Tianao ho faritana haingana ve ny pejy rehetra ao amin'ny tranokalanao? Semalt no hisafidy ny paikady fampivoarana SEO tsara indrindra ho anao.